राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुद्वारा २४ घण्टे अल्टिमेटम - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुद्वारा २४ घण्टे अल्टिमेटम
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुद्वारा २४ घण्टे अल्टिमेटम
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ भदौ ८ गते, ०८:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौं-घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले सामूहिक राजीनामाप्रति भ्रामक अभिब्यक्ति दिएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानका २३ जना चिकित्सकले उपकुलपतिलाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित माग पूरा नभए इमर्जेन्सीबाहेक सेवा नदिने बताएका छन् ।
यसअघि उपकुलपति प्रा.डा. भण्डारीले चिकित्सकहरुको राजीनामा नक्कली भएको बताएकी थिइन् । तर, चिकित्सकहरुले उक्त भनाइको खण्डन गर्दै २ जना चिकित्सक डा. बसन्त लामिछाने र डा. सागर पन्थी बाहेक सबैको राजीनामा सक्कली भएको बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले विभिन्न ८ वटा माग अगाडि सार्दै उक्त माग २४ घण्टाभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम पनि दिएका छन् । उनीहरुले हालै प्रतिष्ठानबाट बर्खास्त गरिएका डा. मनोज यादवलाई पुर्नबहाली गर्नेलगायतका विविध माग राखेका छन् ।